DAAWO: Xisbiga Muuse Biixi Oo Ka Jawaabay Eedeyntii Uu Cirro U Jeediyay | Raxanreeb.net
Afhayeen u hadlay Xisbiga Kulmiye ee haya hogaanka maamulka Soomaaliland ayaa si adag wuxuu uga hadlay eedeyn uu shalay saxaafadda u soo gudbiyey Guddoomiyaha Xisbiga Waddani C/raxmaan Cirro.
C/raxmaan Cirro ayaa wuxuu ku tilmaamay Madaxweynaha Somaliland inuu khiyaamay shacabka Somalialnd kadib markii la ogaaday waraysigii Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda dalka Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Gargaash. uu siiyey Idaacadda BBC in dowladda Soomaaliya ay dekedda magaaladda Berbera heshiiska kula gashay dowladda Imaaraadka Carabta.
Haddaba, Afahayeenka Xisbiga Kulmiye ayaa si cad u diiday inaysan jirin warka sheegaya in dowladda soomaaliya ay wax ka saxiixday heshiiska dekedda magaaladda Berbera balse uu yahay mid dhexeeya Somaliland iyo Imaaraadka Carabta.
Afhayeenka ayaa sidoo kale wuxuu eedeymo ba’an u jeediyey dowladii Siyaad Barre oo uu sheegay inay dad badan oo ka soo jeeda Somaliland dishay qaar kalena xabsiyada u taxaabtay, wuxuuna sheegay in Somaliland wax badan ay iska bedeleen tan iyo wakhtigii la riday dowladdii Siyaad Barre, wuxuuna ganafka ku dhiftay hadalka C/raxmaan Cirro ee sheegayey in Maamulka Muuse Biixi uu horseeday wadadii Kacaanka ee dadka la iska xirxirayey.
C/raxmaan Cirro ayuu ku eedeeyey inuu yahay nin gacanta u lulaya dowladda Soomaaliya, wuxuuna ka codsaday inuu keeno qoraal caddeynaya in Soomaaliya ay heshiiska Berbera kula gashay dowladda Imaaraadka Carabta.